Jubbaland oo kahor timid ansixinta Gollaha Adeegga Garsoorka dalka | Keydmedia
Jubbaland oo kahor timid ansixinta Gollaha Adeegga Garsoorka dalka
Jubbaland ayaa noqonaysa maamulkii labaad oo qaadaca ansixinta Gollaha Adeegga Garsoorka dalka, oo lagu soo beegay xili Farmaajo waqtigiisa uu sii dhamaanayo sanadkan.
KISMAAYO, Soomaaliya - Maamulka Jubbaland ayaa qaadacay dhismaha Hay'adda Batroolka iyo Gollaha Adeegga Garsoorka dalka oo ay dhawaan ansixiyeen Gollaha Wasiirada Xukuumaddii Ra'iisul wasaare Kheyre ee dhawaan kalsoonida lagala noqday.
Madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo warbaahinta kula hadlay magaalada Kismaayo ayaa sheegay in ay ansixinta Gollaha Adeegga Garsoorka dalka ay tahay mid sharci darro ah, islamarkaana aan laga talo-gelin dhinacyadii qaabilsanaa arintaan.
Waxuu sheegay in Gollaha Wasiirada ay yihiin kuwa sii hayayaal ah, balse aysan meel marin karin arrimaha masiiriga dalka ee wada xaajoodka u baahan.
Maxamuud Sayid Aadan ayaa sidoo kale sheegay in Golaha Adeegga Garsoorka uu yahay mid muhiim ah u dalka, balse haatan dad gaar ah loo soo xulay, iyadoo aan lala tashan dhinacyadii qaabilsanaa, sida Maxkamadda sare, ururada qareenada Soomaaliyeed iyo bulshada rayidka.
Horey waxaa arintaan u qaadacay xisbiyada mucaaradka dalka, uruurrada qareennada Soomaaliyeed iyo maamulka Puntland, Jubbaland ayaana noqoneyso maamulkii labaad ee arintaan ganafka ku dhufta.
0 Comments Topics: gollaha adeegga garsoorka gollaha wasiiradda jubaland
Safaaradda Mareykanka ayaa sheegtay in aad uga xun tahay, islamarkaana ay cambaareynayso weerarka argagaxiso, ee lala bartilmaameedsaday dad Muslim ah oo Masjid kasoo baxay.
Warar 5 September 2020 0:27
Al-Shabaab oo laga saarey degaan muhiim ah
Warar 2 September 2020 14:48